China Best Mutengo weSG (B) 10 Series Distribution Transformers Wholesale-Shengte vagadziri uye vanotengesa | Shengte
Mutengo Wakanakisa weSG (B) 10 Series Distribution Transformers Wholesale-Shengte
Kuwedzera kune zvese zvakanakira zvese zvakaomarara-mhando maTransformer muChina, iyo transformer inewo anotevera maitiro:
Insulation: Iyo yekuvhara giredhi ndeye H (180 C) uye dhizaini redundancy yakakura.
Chengetedzo: SG (B) gumi dzakateedzana yakaoma-mhando shanduko yakagadzirirwa se H-kirasi yekumisikidza giredhi, nepo chikuru mainisheni zvinhu iri DuPont NOMEX bepa reUnited States neC-kirasi (kupisa kupisa kunogona kusvika 220 C). Iyo transformer haizove murazvo-unodzora, murazvo-unodzora uye hauzoputika kuburitsa gasi rinotyisa.
Zvakatipoteredza zvine hushamwari: Shanduko musimboti inotonhora yakatenderedzwa nesilicon simbi sheet ine yakakwira magnetic kuitisa uye mhando yepamusoro. Neakasarudzika Dell dhizaini, ruzha rwekushanda rwuri kure zvakanyanya pasi peyakajairwa nyika. Inogona kupora mushure mehupenyu hwakazara hwebasa uye haina kusvibisa nharaunda.
Unyoro hwekudzivirira Kana coil ikarapwa seyakazara, danho rekusimbisa remakondakita uye simba remuchina wecoil inosimbiswa zvakare neyekutsikirira kumanikidza kunyorera pendi kwenguva zhinji. Panguva imwecheteyo, antisepsis uye unyoro kuramba kweiyo transformer kunovandudzwa.
Kugadzikana: Kirasi H kuputira kunogona kumira iko kushanda tembiricha ye180 C. Iyo ine yakanaka kupisa kupisa, yakakwira michini simba, yakanaka kupisa kudzikisira mamiriro, yakasimba kuwandisa kugona, hurefu hupenyu hwehupenyu, husina kukanganiswa nekupisa kwekuwedzera uye kudzora, kuomarara kwakanaka uye kusimba, kusatsemuka.
Hupfumi: Nekuda kweye yakanyanya tembiricha kusagadzikana kweiyo insulation system, iyo inotonhora nzvimbo yeiyo transformer inogona kuderedzwa. Inofananidzwa neiyo transformer ine imwechete yekumisikidza nhanho, chimiro chinogona kugadzirwa zvakanyanya kuumbana uye huremu hunogona kudzikiswa zvakanyanya. Inofananidzwa nerudzi rwegumi neshanu, iyo isina-mutoro kurasikirwa chiyero cherudzi rwegumi transformer inoderedzwa ne15% uye mutengo wekushanda wakadzikira zvakanyanya.
Rated chinzvimbo （KVA) kurasikirwa Kwete-mutoro ikozvino (%) Ipfupi redunhu impedance (%) Chikamu chezwi DB (A) Mbiri Referensi Dimension (mm) Kurema kwemuviri (kg) Gauge (mm)
Hapana mutoro SG10 Mutoro 145 C L x W x H isina ganda L x W x H nenyaya
Pashure: mafuta-akanyudzwa transformer
Zvadaro: OEM Mutengesi we10KV Kirasi S11 Series Pa-Mutoro Voltage-Yakagadziriswa Distribution Shanduri-shengte
OEM nokutengesa nokuti 10KV Kirasi S11 Series On-Mutoro ...